Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fividianana tian'ny YouTube?
Ampitomboy ny fitazomana azy amin'ny fanehoana fiheverana mendrika
Manampy amin'ny fampitomboana ny laharan'ny milina fikarohana
Fandefasana azo antoka sy azo antoka 100%
100% azo antoka AdSense!
Navoaka tamin'ny olona tena izy ny tiany - Tsy misy bot!
Izahay dia manome mihoatra ny nibaiko anao foana!
Fampidinana ny rindran-kira niseho tamin'ny ora 24-72
Soso-kevitra tena ilaina rehefa mividy YouTube dia tia mampitombo ny fantsonao
Tsy misy isalasalana fa YouTube dia iray amin'ireo serivisy fandefasana horonan-tsary lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ankehitriny. Araka ny a Tatitra Statista, Nisy fanadihadiana iray nilaza fa ny ampahany betsaka amin'ireo mpampiasa any Etazonia (74%) no mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny YouTube. Sehatra iray ahafahan'ny olona mizara ny lahatsariny eo amin'ny lampihazo izy io ary mamorona vondron'olona manokana. Ity mpihaino ity dia afaka mandefa fanehoan-kevitra, tia ny horonan-tsary, ary mizara ny atiny amin'ny namany.
Ny tia, ny fijery ary ny fanehoan-kevitra dia metrika tena manan-danja ho an'ny fantsona YouTube rehetra. Izany dia satria ny algorithm YouTube dia natao hankafizana fantsona sy horonan-tsary mampiseho metrika tsara. Ny fahazoana mitovy bebe kokoa dia midika fa ny atiny sy ny fantsonao dia mety ho ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana sy ny tolo-kevitra. Tetika isan-karazany dia azo ampiasaina hahazoana tiana bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo. Azonao atao koa mividy tia YouTube avy amin'ny YTpals, ary jereo ny fitomboan'ny fantsonao. Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny maha-zava-dehibe ny tia ao amin'ny YouTube sy ny paikady isan-karazany azonao ampiasaina hampitomboana azy ireo.
Ny algorithm YouTube sy ny maha-zava-dehibe ny tia
Misy algorithm telo samihafa ampiasaina ao amin'ny YouTube, izay mampiasa metrika amin'ny fisafidianana horonan-tsary ho an'ny tolo-kevitra. Ny algorithm iray dia mifidy horonan-tsary sasany haseho ao amin'ny pejin-tranon'ilay mpampiasa, fa ny iray kosa dia mamaritra horonan-tsary hafa mety ho an'ny mpijery. Raha ny algorithm fahatelo, dia misafidy ny safidy fanolorana fiara manaraka ny horonan-tsary manaraka rehefa mijery horonan-tsary ny mpijery. Rehefa misafidy ireo horonan-tsary hanasongadinana ny YouTube, ny iray amin'ireo fepetra manan-danja indrindra raisina dia ny isan'ny tia. Ny tiana dia mampitombo ny mety hisian'ny laharan-dahatsary ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana sy ny tolo-kevitra. Raha mahazo tiana be dia be ao anatin'ny fotoana fohy ny horonan-tsaryo, dia mety hahazo laza haingana ihany koa eo amin'ny lampihazo.
Tena zava-dehibe ho an'ny fantsona iray ny tia YouTube. Izy io dia milaza amin'ny algorithm YouTube sy ny mpijery fa mendrika ny manamarika ny taham-pidiran'ny mpihaino anao. Azonao atao ny mahazo topimaso momba ny metrika YouTube anao amin'ny alàlan'ny fizarana analyse. Ity dia hilaza aminao ny momba ireo horonan-tsary nahazo tiana be indrindra sy ireo izay tsy nahasarika mpijery betsaka. Rehefa mijery ny horonan-tsarinao ny mpijery vaovao, dia mirona hametraka ny fitsarany amin'ny fifampikasohana azonao avy amin'ireo mpanjifanao na mpijery anao koa izy ireo.
Mety misy fotoana ahazoanao ny fijerinao amin'ny horonan-tsaryo, fa ny fanaovana ny mpihaino anao hifanerasera amin'ny horonan-tsarinao dia lalao baolina hafa mihitsy. Mety tsy maintsy mampahatsiahy ny mpijery anao ianao mba hifanerasera amin'ny horonan-tsarinao tsindraindray. Tena zava-dehibe ny fahazoana hevitra avy amin'ny mpijery anao. Rehefa mahazo valiny tsara avy amin'ny mpijery ianao, dia hitombo ny mety ho mpijery anao ary hanomboka hahazo ny fankasitrahana sy ny fahamendrehana mendrika azy ireo ny horonan-tsarinao.
Tombontsoa amin'ny fananana isa betsaka kokoa amin'ny YouTube
Betsaka ny tombony azo amin'ny fahazoana tia YouTube bebe kokoa. Ity misy lisitry ny antony maha-zava-dehibe ny fananana tia YouTube bebe kokoa amin'ny fitomboan'ny fantsona iray -
Mba hisarihana ny mpijery: Mihevitra ny mpijery fa ny votoaty tsara indrindra dia ahitana j'aime sy fanehoan-kevitra be dia be. Arakaraky ny isa betsaka ny j'aime amin'ny horonan-tsary iray no hiantefan'ny fifamoivoizana mankany aminy. Rehefa manana tiana be dia be ny horonan-tsary ao amin'ny fantsonao, dia mampitombo ny fahatokisany eo imason'ny mpijery izany.
Mba hanamarinana ny fisian'ny fiaraha-monina: Ny foto-kevitry ny haino aman-jery sosialy dia miasa amin'ny foto-kevitra tsotra – arakaraka ny tiana na ny fijerin'ny lahatsary iray no lehibe kokoa ny hery ara-tsosialy. Mitombo ny fahatokisanao eo amin'ny lampihazo rehefa manana isa betsaka kokoa ianao. Rehefa manana mari-pamantarana tsara ianao, dia mino koa ny mpijery fa manana zavatra mendrika hanampiana ny habaka ianao. Ho an'ity tanjona ity dia zava-dehibe ny mametraka toerana iray eo amin'ny lampihazo ary mamolavola baiko momba ny lohahevitra iray. Betsaka kokoa ny tia manakana ny mpifaninana ao amin'ny akaninao ary mitondra ny fantsonao ho lohalaharana.
Mba hampitomboana ny motera fikarohana: Raha mikaroka lohahevitra ao amin'ny YouTube ianao, dia ho tsikaritra fa ireo horonan-tsary misongadina eo amin'ny tampon'ny lisitry ny valin'ny fikarohana dia ireo izay manana isa betsaka kokoa. Rehefa manana isa be dia be ianao dia manadio ny lalanao amin'ny sokajy fikarohana YouTube. Rehefa misy olona mitady lohahevitra mifandraika amin'ny niche-nao, dia mitombo ny mety ho fiakaran'ny horonan-tsaryo amin'ny tolo-kevitra.
Fanentanana ara-barotra mahomby: Mpivarotra an-tserasera maro no mampiasa YouTube mba hampiroboroboana vokatra, serivisy ary votoaty sasany. Raha mahazo tiana sy fijerena betsaka ny lahatsarin'ny fantsona toy izany, dia midika izany fa ny Hafanàm-po an-barotra nahomby ny fampielezan-kevitra. Ny fahazoana tia bebe kokoa amin'ny YouTube dia fomba tsara indrindra hiantohana fa mahasarika ny olona ilay vokatra na serivisy.
Mba hampitomboana ny fahefanao: Rehefa hitan'ny mpijery fa manana tiana sy fanehoan-kevitra be dia be ny horonan-tsaryo, dia azo inoana kokoa fa hihevitra anao ho tompon'andraikitra amin'ny lohahevitra iray ianao. Hatoky ny votoatinao izy ireo amin'ny fanomezana azy ireo fampahalalana marina momba ny lohahevitra iray manokana. Rehefa mitombo ny fahefanao amin'ny niche anao dia ho afaka hiakatra ambonin'ireo mpifaninana aminao ianao ary hiakatra ny lazanao eo amin'ny lampihazo.
Fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao: Ny horonan-tsary misy tiana betsaka kokoa dia mirona hahazo fijery bebe kokoa. Ny horonan-tsary YouTube dia mety tsara amin'ny fitarihana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao manokana na orinasanao. Ny isan'ny tian'ny YouTube betsaka kokoa dia midika ho mpijery bebe kokoa, izay midika ho fitarihana tsara kokoa ho an'ny orinasa.
Ho an'ny mpanjifa YouTube mitombo: Efa voalazanay fa betsaka kokoa ny tia sy maneho hevitra amin'ny horonan-tsaryo dia midika fa hahasarika mpijery bebe kokoa ianao. Rehefa mihamaro ny olona manomboka mijery ny atiny, dia manomboka misoratra anarana amin'ny atiny koa izy ireo. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hahazo mpanjifa bebe kokoa ianao amin'ny alàlan'ny tian'ny YouTube.
Soso-kevitra hahazoana tiana YouTube bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo
Mba hahazoana tombony amin'ny famatsiam-bola amin'ny YouTube dia zava-dehibe ny mifandray amin'ireo mpijery kendrena. Mitaky fotoana sy ezaka ny fananganana tobin'ny mpihaino mahasarika. Ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra atrehin'ny fantsona mitombo dia ny fampiakarana ny olona hifanerasera amin'ireo horonan-tsary. Mety ho be dia be ny olona mijery ny horonan-tsarinao, saingy tsy betsaka amin'izy ireo no miala amin'ny j'aime. Noho izany dia tsy maintsy mampiditra fampahatsiahivana tsy tapaka ianao mangataka ny mpijery anao handefa fanehoan-kevitra sy hitia ny horonan-tsarinao. Amin'izany fomba izany dia ho afaka hanatsara ny famakafakana ny fandraisanao anjara amin'ny YouTube ianao.
Amin'ity fizarana manaraka ity dia hanome anao toro-hevitra maromaro izahay mba hampitomboana ny isan'ny tia amin'ny horonan-tsaryo. Amin'ny fampiasana ireo toro-hevitra ireo dia azonao atao ny mamolavola ny paikadinao hampitomboana ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny sehatra. Misy safidy hafa hampitomboana ny tian'ny YouTube anao, izay azonao ampidirina ho fanampin'ny fampiharana ireo torohevitra ireo. Izany dia amin'ny fividianana ny tian'ny YouTube amin'ny loharano azo antoka. Rehefa mividy tian'ny YouTube ianao dia afaka miantoka ny fitomboan'ny fantsonao ary tsy ho ela dia hanomboka hahita mpijery sy mpanjifa tena mandray anjara amin'ny atiny ianao.
Fampitomboana ny tia amin'ny votoatin'ny horonan-tsary
Raha te hahazo tiana bebe kokoa amin'ny YouTube ianao, dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny votoatin'ny horonan-tsarinao dia tonga lafatra. Ireto misy toro-hevitra vitsivitsy hanatsarana ny atiny video hahazoanao tiana bebe kokoa amin'ny YouTube.
1. Mamorona votoaty mampiala voly sy manabe
Tonga ao amin'ny YouTube ny olona noho ny antony samihafa. Indraindray dia mety te-hianatra zavatra momba ny lohahevitra iray izy ireo ary indraindray dia mety te hampiala voly fotsiny. Rehefa mamorona horonan-tsary eo amin'ny lampihazo ianao dia zava-dehibe ny hahazoana antoka fa manolotra ny sanda tsara indrindra ho an'ny mpihaino araka izay ilainy ianao. Amin'izany fotoana izany, tsy tokony hanaiky lembenana amin'ny kalitao ianao. Azonao atao ny mianatra izay tian'ny mpihaino ho hita amin'ny fanaovana fikarohana teny fanalahidy. Ny sasany amin'ireo lohahevitra karohina be indrindra ao amin'ny YouTube dia ny sakafo, fialamboly, mozika, fanatanjahantena, lalao, fitsangatsanganana, fanatanjahantena, hatsaran-tarehy, ary lamaody. Azonao atao ihany koa ny manao fitsapan-kevitra amin'ny Internet. Ataovy azo antoka koa fa mifanaraka amin'ny tsiron'ny mpihaino anao ny endrik'ireo horonan-tsaryo. Azonao atao ny mandinika ny fanaovana horonan-tsary, famerenana ny vokatra, unboxing, top 10, famoahana vokatra, Q&A, sns.
2. Jereo ny fironana viral
Afaka mahazo tia be dia be amin'ny atiny ianao amin'ny famoronana horonan-tsary mifototra amin'ny lohahevitra iray efa malaza. Amin'izany fomba izany dia azonao ampiasaina fironana viral ho tombontsoanao. Rehefa miparitaka ny lohahevitra sasany dia te-hahafantatra bebe kokoa momba izany ny olona. Azonao atao ny maka ohatra amin'ny fanamby amin'ny siny gilasy, ohatra. Rehefa nivoaka voalohany ilay fanamby, dia naniry ny hahafantatra bebe kokoa momba izany ny olona satria nahita olo-malaza maro nanandrana izany. Azonao atao ihany koa ny mampifantoka ny sainao amin'ny lohahevitra malaza amin'ny vaovao sy ny kolontsaina malaza. Tsy mora foana ny famatorana ny horonan-tsarinao amin'ny fironana malaza, na izany aza, azonao atao ny mampitombo ny tianao amin'ny sehatra amin'ny famoronana votoaty mifandraika amin'ny teny manodidina.
3. Fiaraha-miasa amin'ny YouTubers
Fomba lehibe iray hafa hitondrana mpijery maro kokoa handefa tia sy fanehoan-kevitra amin'ny horonan-tsaryo dia ny fiaraha-miasa amin'ireo YouTubers hafa. Azonao atao ny mandray anjara lehibe amin'ny mpijery amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo mpikatroka indostrialy amin'ny horonan-tsaryo. Izany dia satria ireo influencers ireo dia efa mirona ho mpihaino efa zatra anao. Rehefa miara-miasa amin'ny YouTubers hafa ianao dia mamporisika ny mpijery azy hijery ny fantsonao ihany koa.
Ny fijerena bebe kokoa dia midika ho tia sy fanehoan-kevitra bebe kokoa. Ho fanampin'ny fanampiana ireo mpijery anao, ny fiaraha-miasa amin'ny YouTubers dia afaka manome fomba fijery hafa momba ny lohahevitry ny niche anao. Manome fahefana bebe kokoa ny fantsonao amin'ny habaka YouTube izany. Mety hahasoa ny fiaraha-miasa amin'ireo YouTubers hafa, satria hampitombo ny tiana sy ny tahan'ny fandraisana anjara amin'ny fantsona roa izany.
Afaka mahazo mpijery bebe kokoa ianao hijery ny horonan-tsarinao ary farany handefa fanehoan-kevitra sy tia bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny endri-javatra karatra YouTube. Ny karatra YouTube dia ahafahanao mampiroborobo ny horonan-tsary hafa ao anaty video. Afaka mampiasa karatra YouTube ianao -
Mba hampiroboroboana horonan-tsary hafa avy amin'ny fantsonao
Mba hampahatsiahivana ny olona hiala amin'ny fitiavana
Ho famporisihana ny mpampiasa hameno ny fitsapan-kevitra
Mba hitarihana ny mpijery ho any amin'ny pejin'ny fanomezanao
Ho fanomezana ho an'ny tsy mitady tombony
Mba hahazoana mpanjifa bebe kokoa amin'ny fantsona
Mba handefasana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao
Ny karatra YouTube dia mety ho tsara amin'ny fampiroboroboana ny horonan-tsarinao tsy dia mahomby izay tsy dia misy mpijery sy tia. Raha te hampiditra karatra amin'ny YouTube-nao dia zava-dehibe ny mijery hoe aiza ny toerana hialana amin'ny fizarana YouTube analytics. Tsara ny manampy ny karatra YouTube alohan'io fotoana io.
5. Horonantsary Famaranana
Azonao atao koa ny mampiasa ny endri-pijery farany mba hampidirana antso ho amin'ny hetsika ao amin'ny fantsona YouTube anao. Azonao atao ny mampiasa ny efijery farany hampahafantarana ny mpijery bebe kokoa momba ny fantsonao, ary azonao atao ny mangataka azy ireo hitia ny horonan-tsaryo. Ny efijery farany dia azo ampiasaina hanoroana ny horonan-tsary hojerena manaraka. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hitarika ny mpijery anao amin'ny sasany amin'ireo horonan-tsaryo ianao izay nahazo mpijery sy tia kely kokoa taloha. Raha te hampiditra efijery farany amin'ny horonan-tsarinao ianao dia mila mivezivezy ao amin'ny studio YouTube ary tsindrio ny kisary pensilihazo mba hijerena ny antsipirian'ny horonan-tsary. Ao amin'io fizarana io dia ho hitanao ny safidy End Screen. Azonao atao ny misafidy ny hampiditra ny karazana efijery farany tianao amin'ny safidy manga plus, ary aorian'izay, ny hany ataonao dia ny manindry ny Save.
6. Fampiroboroboana horonantsary amin'ny sehatra media sosialy
Fomba iray hafa hampitomboana ny tiana ao amin'ny YouTube dia ny fampiroboroboana ny horonan-tsarinao amin'ny sehatra media sosialy hafa an-tserasera. Tambajotra media sosialy maro hafa toa ny Facebook, Instagram ary Twitter no manana votoaty video ihany koa. Ireo fantsona ireo dia azo ampiasaina hampiroboroboana ny horonan-tsaryo mba hampitomboana ny isan'ny mpijery, tia, ary mpanjifa. Ao amin'ny Instagram, azonao atao ny mampiasa ny endri-tantara hizarana teaser amin'ny horonan-tsary YouTube anao ary ampio ny rohy mankany amin'ny horonan-tsary ao amin'ny bio anao. Ny fampiroboroboana ny horonan-tsarinao YouTube dia fomba tsara hanehoana amin'ny mpanaraka anao fa manana vondrom-piarahamonina mavitrika ianao ao amin'ny YouTube ary mety ho anisan'izany koa izy ireo. Rehefa mijery ny horonan-tsarinao ny mpijery vaovao dia handefa fanehoan-kevitra sy tia bebe kokoa.
Fampitomboana ny tian'ny SEO
Raha te hampitombo ny mpijery sy ny fandraisanao anjara amin'ny sehatra ianao, dia zava-dehibe ny mianatra momba ny teknikan'ny fikarohana fikarohana (SEO). Ny algorithm YouTube dia manivana votoaty amin'ny milina fikarohana mifototra amin'ny lafin-javatra sasany. Noho izany dia zava-dehibe ny manatsara ny lohateninao, ny marika ary ny famaritana ny horonan-tsary. Ireto misy fomba sasany hampitomboana ny tiana amin'ny horonan-tsary YouTube amin'ny SEO:
1. Mamorona lohateny video izay manankarena teny fanalahidy
Tena ilaina ny fikarohana teny fototra mba hahazoana antoka fa mahatratra ny mpijery kendrena ny atiny. Ireo dia andian-teny sy teny ampiasain'ny olona hitadiavana votoaty. Rehefa manamboatra ny atiny manodidina ny teny fanalahidy kendrena ianao dia azonao antoka fa ny milina fikarohana dia manoro azy ireo amin'ireo mpijery kendrena. Mba hahafahanao mampitombo ny fahafahanao hahazo fijery sy tia bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo teny fanalahidy mifandraika amin'ny lohateninao. Amin'izany fomba izany, ny mpijery anao dia ho afaka hahita mora kokoa ny atiny. Betsaka ny fitaovam-pikarohana teny fanalahidy azo alaina amin'ny Internet izay azo ampiasaina hahitana ireo teny fanalahidy mifandraika amin'izany. Fomba iray hafa hahitana teny fanalahidy manokana YouTube dia ny fampidirana lohahevitra iray ao amin'ny bara fikarohana. Ny teny fanalahidy dia ireo zavatra vinavinaina mipoitra rehefa mikaroka lohahevitra iray ianao. Ireo teny vinavinaina ireo no tadiavin'ny ankamaroan'ny mpijery.
2. Ampio ny teny fanalahidy amin'ny famaritana video
Azonao atao ny manatsara ny famaritana ny horonan-tsary toy ny lohatenin'ny horonan-tsary. Ny famaritana video dia ny faritra ianaran'ny mpijery ny momba ny horonan-tsaryo. Azo ampiasaina hampitomboana ny laharanao amin'ny valin'ny fikarohana ihany koa izy io amin'ny fampiasana teny fanalahidy mifandraika amin'izany. Amin'ny fampiasana ny paikadin'ny teny fototra dia tsy hanatsara ny tahan'ny click-through fotsiny ianao fa hampitombo ny tianao sy ny fomba fijerinao. Ny famaritana horonan-tsary dia tokony hovolavolaina amin'ny fomba izay manintona ny fahalianan'ny mpihaino, raha mbola mampiditra teny fanalahidy mahasoa.
3. Ampio marika amin'ny horonan-tsary YouTube
Ny mari-pamantarana video ao amin'ny YouTube dia tsara amin'ny fanasokajiana ny atiny amin'ny algorithm fikarohana. Manampy amin'ny fahatakarana ny lohahevitra nokendrenao ny horonan-tsary. Ho fanampin'ny lohatenin'ny horonan-tsary sy ny famaritana, dia tsy maintsy ampiasaina araka ny tokony ho izy amin'ny horonan-tsaryo ireo marika video. Azonao atao ihany koa ny mijery ireo mari-pamantarana horonan-tsary ampiasain'ny mpifaninana mba hampivelatra ny fahatakarana ireo izay mifandraika amin'ny niche anao. Raha hijery ireo marika amin'ny horonan-tsary rehetra dia azo arahina ireto dingana manaraka ireto -
Mandehana any amin'ny lahatsary YouTube mampiasa navigateur web rehetra.
Tsindrio havanana amin'ny pejy ary safidio ny "View Page Source."
Tsindrio Ctrl + F (ho an'ny Windows) na Command + F (ho an'ny Mac). Hisy kaody loharano hivoaka izay azo ampiasaina hikaroka teny fanalahidy avy eo.
Ho afaka hijery ny lisitry ny marika ampiasaina amin'io video io ianao.
4. Ampiasao amin'ny tombontsoanao ny sarin'ny thumbnail
Afaka mahazo tiana bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo ianao amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny sary thumbnail amin'ny horonan-tsaryo. Zava-dehibe ny sary thumbnail amin'ny fampisongadinana ny horonan-tsarinao ao amin'ny pejin-tranonkala YouTube, lisitry ny horonan-tsary soso-kevitra, valin'ny horonan-tsarimihetsika milina fikarohana, ary koa amin'ny media sosialy. Ny fananana thumbnail mahasarika ny maso amin'ny horonan-tsaryo dia afaka mamporisika olona maro kokoa hijery sy handefa fanehoan-kevitra ary tia amin'ny atiny. Manodidina ny 1280 × 720 ny habe atolotra ho an'ireo horonan-tsary, izay tokony ho 640 pixel ny sakany kely indrindra. Ny sary avo lenta dia tokony hanana endri-tsoratra mahasarika mba hampitomboana ny fahaiza-mamaky. Azonao atao ihany koa ny mampiasa akaiky ho an'ny tarehy mba hanaitra fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny mpihaino. Ny thumbnail dia tokony hifanaraka amin'ny atiny video. Ny fampiasana hacks clickbait amin'ny fanatsarana ny thumbnails dia tsy hevitra tsara velively satria mamitaka ny mpijery.
5. Mampiasà fandikana video
Ny fandikana horonan-tsary dia fantatra amin'ny anarana mihidy ao amin'ny YouTube. Ny fandikana video dia afaka manatsara ny laharan'ny horonan-tsaryo eo amin'ny lampihazo ary mahatonga azy ireo ho azo idirana kokoa. Amin'ny fampiasana lohateny mihidy dia afaka mijery ny horonan-tsarinao ny mpihaino marobe. Izany dia satria ny ampahany betsaka amin'ny mpanatrika dia mety tsy mitovy fiteny na mety ho sembana mihitsy aza. Amin'ny alalan'ny fampidirana lahatsoratra mihidy dia ataonao ho mora idirana kokoa amin'izy ireo ny horonan-tsary ary manasa mpijery maro kokoa hifanerasera amin'ny atiny sy handefa fanehoan-kevitra sy tia.
Fividianana Tian'ny YouTube - Zava-dehibe sy Tombontsoa
Ny maha-zava-dehibe ny tia ny YouTube dia efa nambara tamin'ireo teboka voalaza etsy ambony. Ny fomba iray hahazoana tiana bebe kokoa amin'ny horonan-tsaryo dia ny fangatahana ny mpijery anao hitia, hizara ary hisoratra anarana amin'ny fantsonao. Na izany aza, indraindray ianao dia mety tsy hahazo ny fandraisana anjara ilaina amin'ny mpijery anao na dia aorian'ny fampiasana ireo paikady rehetra voalaza etsy ambony aza. Amin'ny toe-javatra toy izany, hevitra tsara ny mandoa ny tian'ny YouTube avy amin'ny mpanome tolotra azo itokisana toa ny YTpals.
Ny fividianana tian'ny YouTube dia hahatonga anao ho mpijery tsy tapaka, izay hanampy amin'ny farany hamporisika olona maro hisoratra anarana amin'ny fantsonao sy hifanerasera amin'ny atiny. Mety ho hitan'ny mpihaino vaovao ny horonan-tsarinao, izay tsy ho nahita ny fantsonao raha tsy izany. Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo tombony amin'ny fividianana ny tian'ny YouTube.
1. Manome porofo ara-tsosialy eo amin'ny lampihazo ny fantsonao
Raha te-hanao viriosy ny horonan-tsaryo ianao ary hivarotra ny atiny video dia zava-dehibe ny fananana fahefana eo amin'ny lampihazo. Araka ny efa voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity dia azo ampitomboina ny laza na ny fisian'ny sehatra amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny metrik'ny fantsona YouTube anao. Ny tian'ny YouTube dia metrika manan-danja amin'ny fandrefesana ny toerana ara-tsosialy amin'ny fantsona iray. Rehefa mividy tia ianao dia ho afaka hahazo fankasitrahana sy hampitombo ny fahatokisana amin'ny sehatra. Izy io dia porofo ara-tsosialy, izay hanampy anao hahazo mpijery sy mpanjifa bebe kokoa amin'ny ho avy.
2. Ampitomboy ny laharana amin'ny valin'ny fikarohana
Ny fomba tsara indrindra hampitomboana ny mpijery ny horonan-tsary dia amin'ny alàlan'ny fanatsarana azy ireo mba hiseho amin'ny valin'ny fikarohana. Araka ny fikarohana vao haingana, maherin'ny 60 isan-jaton'ny mpijery ao amin'ny YouTube no mikaroka ireo horonan-tsary amin'ny alalan'ny lohahevitra ao amin'ny bara fitadiavana fa tsy mitsidika fantsona iray. Azonao atao ny mampitombo ny laharan'ny horonan-tsaryo amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny metrikao izay ahitana tiana, fijery ary fanehoan-kevitra. Rehefa mividy tian'ny YouTube ianao dia manoro hevitra amin'ny algorithm YouTube fa ambony kokoa ny tahan'ny fandraisanao anjara. Amin'izany fomba izany, dia ho afaka hahazo laharana ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana ianao rehefa mikaroka lohahevitra momba ny niche anao ny olona. Amin'ny farany, ny fantsonao dia afaka mamorona fifamoivoizana organika ihany koa, izay hampitombo bebe kokoa ny tahan'ny fandraisana anjara.
3. Mba hisarihana ny mpihaino kendrena
Rehefa avy namorona lahatsary momba ny lohahevitra iray ianao dia te-hiantoka fa tonga amin'ny mpihaino mety izay mankasitraka ny fandraisanao anjara. Azonao atao ny miantoka fa mahatratra ny mpihaino kendrena ny horonan-tsarinao amin'ny fividianana tian'ny YouTube amin'ny loharano azo itokisana toa an'i YTpals. Rehefa manana tiana sy fanehoan-kevitra betsaka kokoa amin'ny horonan-tsaryo ianao dia midika izany fa manana fahefana manokana momba ilay lohahevitra ianao. Hatoky ny karazana atiny noforoninao ny mpijery vaovao. Ny fividianana j'aime dia paikady tena tsara hisarihana ny mpihaino kendrenao.
4. Ho an'ny fitaterana fifamoivoizana mankany amin'ny sehatra media sosialy hafa
Rehefa mandoa j'aime ianao dia mampitombo ny fahitanao eo amin'ny lampihazo. Ny mpijery dia afaka mahita mora kokoa ny atiny ary avy eo dia manomboka mitombo hatrany ny isan'ny mpanjifanao. Ny mpijery anao ao amin'ny YouTube dia azo ampitaina amin'ny sehatra media sosialy hafa izay tianao hametrahana fanatrehana matanjaka mitovy. Tena ilaina tokoa izany amin'ny fivarotana ny vokatrao raha manana orinasa ianao. Fantatra fa mirona amin'ny votoaty video ny olona, ​​ka azonao atao ny mitarika ny fifamoivoizana YouTube amin'ny tranokala, izay mety ho tena ilaina amin'ny fampitomboana ny fivarotana vokatra na serivisy.
5. Mba hanombohana ny dia YouTube
Rehefa manomboka fantsona ianao dia mety ho sarotra ny mahazo mpijery hijery ny atiny. Raha te hanomboka ny asanao YouTube ianao dia tena zava-dehibe ny fandraisana anjara amin'ny horonan-tsary voalohany. Ny fividianana ny tian'ny YouTube dia mety hampiala anao amin'ny lalana marina ary ny fantsonao dia afaka manomboka mazoto. Hampitombo ny mpijery anao eo amin'ny lampihazo izany, ary rehefa mandeha ny fotoana dia hijanona amin'ny atiny ny mpanjifanao. Afaka manampy amin'ny fitondrana ny asanao YouTube ho amin'ny ambaratonga manaraka izany.
6. Mahazo laza
Raha te ho lasa fahatsapana YouTube ianao, dia ny fividianana ny tian'ny YouTube dia afaka mametraka anao amin'ny lalana marina hahatratrarana ny tanjonao. Mahazo laza ao amin'ny YouTube manokatra tontolon'ny fahafahana ho an'ny olona, ​​anisan'izany ny fanohanana. Raha manohy mamorona horonan-tsary mahasarika ianao dia afaka manangana toby famandrihana manokana. Tsy hifanerasera amin'ny atiny fotsiny izy ireo fa hampiroborobo izany koa.
7. Mba hijanonana mialoha ny fifaninanana
YouTube dia sehatra iray tena mifaninana, izay misy horonan-tsary an-tapitrisany ampiana isan'andro. Raha te hijanona eo alohan'ny fifaninanana ianao dia tsy maintsy mampiasa paikady hanampy amin'ny fitomboanao. Azo inoana fa ny ankamaroan'ny mpifaninana aminao dia mividy tia sy fanehoan-kevitra YouTube. Noho izany dia tsara ny mividy Tian'ny YouTube ho an'ny fantsonao raha tsy te ho sahirana ianao.
Ankehitriny rehefa fantatrao ny maha-zava-dehibe sy ny tombony amin'ny fividianana tian'ny YouTube, azonao atao ny mieritreritra ny hividy azy ireo ho an'ny fantsonao mba hanampiana amin'ny fitomboany. Rehefa mividy tia amin'ny YTpals ianao dia ho afaka hampitombo ny fitazonana ny mpijery amin'ny horonan-tsaryo. Hanomboka hiseho 24 ka hatramin'ny 72 ora aorian'ny fametrahana ny kaomandy ny valiny, ary olona tena izy no aterina fa tsy bots. Afaka mifandray aminay ianao anio raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisy YouTube premium amin'ny YTpals.
Nampidirina anaty sarety anao ny YouTube Likes.